Fold Up Rolling Door China Manufacturers & Suppliers & Factory
Fold Up Rolling Door - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Fold Up Rolling Door ထုတ်ကုန်များ)
pvc fold up speed rolling door
ထုပ်ပိုး: wooden case package
big szie pvc rolling up door Independent fast door frequency control system, with high stability and reliability.Widely used in food chemistry textile electronics supemarket refrigeration logistics,warehousing and other places.High quality stainless steel plate welding, surface anti-corrosion treatment, is not easy to...
မြန်နှုန်းမြင့် Roller Shutter Door ကိုအသုံးပြုပါ
PVC အမြန်နှုန်း တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်မရေမတွက်နိုင်သောတံခါးများ၊ ကော်ဖီဆိုင်များ၊ အရက်ဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ကုမ္ပဏီ၊ စက်ရုံ၊ PVC အမြန်နှုန်းမြင့်တံခါးရှိကြောင်းသင်သတိပြုမိပါသလား။ ဒီ RAPID တံခါးဟာလူတိုင်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်ဆန်သောကြောင့်လူကြိုက်များလာသည်။...
စက်ရုံအစာရှောင်ခြင်း Rolling အလိုအလျောက် Rolling Shutter တံခါး
စက်ရုံအစာရှောင်ခြင်း Rolling အလိုအလျောက် Rolling Shutter တံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent curtain: 1.2...
စက်ရုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များမြန် Rolling အလိုအလျောက်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး
စက်ရုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များမြန် Rolling အလိုအလျောက်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent curtain: 1.2...
စက်ရုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ PVC မြန် Rolling အလိုအလျောက်တံခါး
စက်ရုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ PVC မြန် Rolling အလိုအလျောက်တံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent curtain: 1.2...
စက်ရုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များမြန် Rolling အလိုအလျောက်တံခါး
စက်ရုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များမြန် Rolling အလိုအလျောက်တံခါး High Speed Door Grey, Yellow grid, Purple, Green, Light green, Black, Perforated Yellow grid, White, Blue, White grid, Sky Blue, Yellow, Orange, Red Color curtain: 0.8 mm thickness. Transparent curtain: 1.2...
Fold Up Rolling Door Self Repair Rolling Up Door Pvc Fold Up Door Self Healing Roll Door Professional Rolling Shutter Door Automatic Upgrading Door Hospital Sliding Door Automatic Sliding Door